IBALI LOBOMI Oonongendi Bafunda Inyaniso
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Isoko Isi-Itali IsiAukan IsiBaoule IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBiak IsiBislama IsiCambodia IsiChitonga IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiDangme IsiDrehu IsiEfik IsiEwe IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiHausa IsiHmong (White) IsiJavanese IsiKabiye IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKiluba IsiKimbundu IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLaotia IsiLingala IsiLunda IsiLuvale IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMixe IsiMizo IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNigerian Pidgin IsiNyaneka IsiNzema IsiOtetela IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiSaramaccan IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiTahiti IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiTzeltal IsiUmbundu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
IMboniselo—Yokufundisa | Aprili 2016
‘Yibani ngabaxelisa abo bathi ngokholo nomonde bazidle ilifa izithembiso.’—HEBHERE 6:12.
IINGOMA: 86, 54
Umzekelo kaYifeta nentombi yakhe ungasinceda njani sixhathise impembelelo yehlabathi?
Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile oyifumanisa iluncedo ekusombululeni iingxabano zobuqu?
Eli nqaku likukhuthaze njani ukuba uncame izinto ezithile ngenxa yoBukumkani?
1, 2. Luluphi uvavanyo uYifeta nentombi yakhe abajamelana nalo?
IBHINQA eliselula labaleka lisiya kuhlangabeza uyise. Lalivuya kakhulu ukumbona ebuya emfazweni. Uloyiso lwakhe olukhulu lwenza eli bhinqa lacula laza ladanisa luvuyo. Kodwa kumele ukuba oko kwenziwa nokwathethwa nguYise kwalothusa kakhulu. Wakrazula iimpahla zakhe waza ngesijwili wathi: “Awu, ntombi yam! Eneneni undenze ndagoba phantsi.” Walixelela ukuba wenze isithembiso kuYehova, esasiya kubutshintsha ngonaphakade ubomi balo. Isithembiso sakhe sasithetha ukuba, lalingasoze litshate okanye libe nabantwana. Kodwa ngokukhawuleza laphendula kamnandi, likhuthaza uYise ukuba agcine isithembiso sakhe kuYehova. Impendulo yalo yayibonisa ukuba lalinentembelo yokuba, nantoni na uYehova ayicelayo kulo, ilungile. (ABagwebi 11:34-37) Xa uYise wabona ukholo lwentombi yakhe, waba nelunda ngayo kuba wayesazi ukuba ukuvuma kwayo kwakuya kumvuyisa uYehova.
2 UYifeta nentombi yakhe babemthembe ngokupheleleyo uYehova nendlela yakhe yokwenza izinto. Bathembeka naxa kwakungekho lula. Babefuna inkoliseko kaYehova, nto leyo exabiseke ngaphezu kwayo nantoni na.
3. Kutheni umzekelo kaYifeta nentombi yakhe unokuba luncedo kuthi kule mihla?
3 Akusoloko kulula ukunyaniseka kuYehova. Simele ‘silulwele nzima ukholo.’ (Yude 3) Ukuze senjenjalo, masifunde indlela uYifeta nentombi yakhe abanyamezela ngayo uvavanyo ebomini babo. Bahlala njani benyanisekile kuYehova?
UKUNYANISEKA NAKUBA KUKHO IMPEMBELELO YEHLABATHI
4, 5. (a) Nguwuphi umyalelo uYehova awawunika amaSirayeli ekungeneni kwawo kwiLizwe Lesithembiso? (b) Ngokutsho kweNdumiso 106, kwenzeka ntoni kumaSirayeli ngenxa yokungathobeli kwawo?
4 UYifeta nentombi yakhe, babewukhumbula umphumo wokungathobeli uYehova kwamaSirayeli. Malunga neminyaka eyi-300 ngaphambili, uYehova wayeyalele amaSirayeli ukuba abulale bonke abanquli bobuxoki kwiLizwe Lesithembiso, kodwa awazange athobele. (Duteronomi 7:1-4) Uninzi lwamaSirayeli lwaxelisa amaKanan awayenqula oothixo bobuxoki nawayeziphethe kakubi.—Funda iNdumiso 106:34-39.
5 Ngenxa yokungathobeli kwamaSirayeli, uYehova akazange awakhusele kwiintshaba zawo. (ABagwebi 2:1-3, 11-15; INdumiso 106:40-43) Kumel’ ukuba kwakunzima kwiintsapho ezazimthanda uYehova ukuqhubeka zithembekile ngaloo maxesha obunzima. Sekunjalo, iBhayibhile ikhankanya ukuba babekho ababethembekile njengoYifeta nentombi yakhe, uElikana, uHana noSamuweli. Babezimisele ukuvuyisa uYehova.—1 Samuweli 1:20-28; 2:26.
6. Yiyiphi impembelelo yehlabathi ekhoyo namhlanje, yaye simele sisabele njani?
6 Kule mihla yethu, abantu bacinga baze benze njengamaKanan. Banikele ingqalelo ekuziphatheni okubi, kugonyamelo, nemali. Kodwa uYehova usinika izilumkiso ezicacileyo. Ufuna ukusikhusela ngendlela awayefuna ukukhusela ngayo amaSirayeli kuloo mpembelelo imbi. Ngaba siza kufunda kwiimpazamo zawo? (1 Korinte 10:6-11) Simele senze unako-nako ukuphepha iingcinga zehlabathi. (Roma 12:2) Ngaba singazama kangangoko ukwenza njalo?
UYIFETA WAHLALA ETHEMBEKILE PHEZU KOKUPHOXEKA
7. (a) Yiyiphi ingcinezelo uYifeta awayifumana kubantu bakowabo? (b) Wasabela njani uYifeta?
7 Ngemihla kaYifeta, amaSirayeli ayephantsi kwengcinezelo yamaFilisti nama-Amoni, ngenxa yokuba ayengamthobelanga uYehova. (ABagwebi 10:7, 8) Ukongezelela kwizizwe eziziintshaba, uYifeta wajamelana nengcinezelo yabantakwabo neenkokeli zakwaSirayeli. Ngenxa yokuba nomona nokumcaphukela, abantakwabo bamnyanzela ukuba ahambe ashiye umhlaba wakhe. (ABagwebi 11:1-3) UYifeta akazange avumele impatho-mbi yabo ukuba ichaphazele isimo sakhe sengqondo. Sikwazi njani oko? Kuba xa amadoda amakhulu olo hlanga amcenga ukuba awancede, wavuma ngoko nangoko. (ABagwebi 11:4-11) Yintoni eyenza uYifeta asabele ngale ndlela?
8, 9. (a) Yiyiphi imigaqo efumaneka kuMthetho kaMoses, emele ukuba yanceda uYifeta? (b) Yintoni eyona nto yayibalulekile kuYifeta?
8 UYifeta wayelikroti elinamandla, yaye wayeyazi kakuhle imbali yamaSirayeli noMthetho kaMoses. Indlela uYehova awayeqhubana ngayo nabantu bakhe, yamfundisa imilinganiselo kaThixo yokulungileyo nokungalunganga. (ABagwebi 11:12-27) UYifeta walusebenzisa olo lwazi ebomini bakhe xa esenza izigqibo. Wayeyazi kakuhle indlela uYehova avakalelwa ngayo ngokuba nomsindo nokuziphindezela, nendlela afuna abantu bathandane ngayo. Ukongezelela, uMthetho wamfundisa indlela amele abaphathe ngayo abantu, kuquka nabo babemcaphukela.—Funda iEksodus 23:5; Levitikus 19:17, 18.
9 Kusenokwenzeka ukuba uYifeta wancedwa ngumzekelo kaYosefu. Umele ukuba wayefundile ngendlela uYosefu awabonakalisa ngayo inceba kubantakwabo, nakuba babemcaphukela. (Genesis 37:4; 45:4, 5) Ukucingisisa ngalo mzekelo, kumele ukuba kwamnceda uYifeta asabele ngendlela eyayimkholisa uYehova. Oko kwenziwa ngabantakwabo, kwamvisa ubuhlungu nyhani uYifeta. Sekunjalo, ukulwela igama likaYehova kwakubaluleke ngakumbi kuneemvakalelo zakhe. (ABagwebi 11:9) Wayezimisele ukuthembeka kuYehova. Esi simo sengqondo samzisela intsikelelo kaYehova, yena namaSirayeli.—Hebhere 11:32, 33.
Asimele sivumele ukuphoxeka kusiyekise ukukhonza uYehova
10. Sinokuyivumela njani imigaqo yobuthixo isincede siziphathe njengamaKristu namhlanje?
10 Ngaba singafunda nto kumzekelo kaYifeta? Siya kuthini xa sivakalelwa kukuba abazalwana bethu bayasiphoxa okanye abasiphathi kakuhle? Asimele sivumele ukuphoxeka kusiyekise ukukhonza uYehova. Ungaze uyeke ukuya kwiintlanganiso zamaKristu okanye ukunxulumana nebandla. Masixelise uYifeta size sithobele uYehova. Oku kuza kusinceda simelane neemeko ezinzima size nathi sibe yimizekelo emihle.—Roma 12:20, 21; Kolose 3:13.
UKUZINCAMA KUBONISA UKHOLO LWETHU
11, 12. Sisiphi isithembiso esenziwa nguYifeta, yaye oko kwakubandakanya ntoni?
11 UYifeta wayeqonda ukuba udinga uncedo lukaThixo ukuze akhulule amaSirayeli kuma-Amoni. Wathembisa uYehova ukuba, ukuba wayenokumnika uloyiso, wayeya kunikela kuye “njengomnikelo otshiswayo” umntu wokuqala ophume endlwini yakhe ukuza kumhlangabeza xa ebuya emfazweni. (ABagwebi 11:30, 31) Kwakuthetha ukuthini oko?
12 UYehova uyakucekisa ukubingelelwa kwabantu, ngoko siyaqonda ukuba uYifeta wayengazukubingelela ngokoqobo. (Duteronomi 18:9, 10) Phantsi koMthetho kaMoses, umbingelelo otshiswayo yayisisipho umntu awayesinikela kuYehova ngokupheleleyo. Ngoko, uYifeta wayesithi, umntu anikela ngaye wayeya kukhonza emnqubeni ubomi bakhe bonke. UYehova wamphulaphula uYifeta waza wamnceda woyisa ngokupheleleyo. (ABagwebi 11:32, 33) Kodwa wayeza kunikela ngabani uYifeta?
13, 14. Amazwi kaYifeta akuBagwebi 11:35, abonisa ntoni ngokholo lwakhe?
13 Khawucinge ngoko kukhankanywe ekuqaleni kweli nqaku. Xa uYifeta wayebuya emfazweni, umntu wokuqala ukumhlangabeza yaba yintombi yakhe, umntwana wakhe wokuqala nowokugqibela! Ngaba uYifeta wayeza kusigcina isithembiso sakhe? Ngaba wayeza kunikela ngentombi yakhe ukuba iye kukhonza emnqubeni ubomi bayo bonke?
14 Imigaqo ekuMthetho kaThixo, imele ukuba yamnceda uYifeta ukuba enze isigqibo esifanelekileyo. Mhlawumbi wakhumbula amazwi akwiEksodus 23:19 athi, abantu bakaThixo bamele banikele ngokona kulungileyo kuYehova. UMthetho wawukwathi, xa umntu enze isifungo kuYehova, “makangalaphuli ilizwi lakhe. Makenze ngokwako konke okuphume emlonyeni wakhe.” (Numeri 30:2) NjengoHana, ekusenokwenzeka ukuba wayephila ngaxeshanye naye, uYifeta wayemele agcine isithembiso sakhe, nangona wayesazi ukuba oko kwakuza kuthetha ntoni kuye nentombi yakhe. Ekubeni intombi yakhe yayiza kukhonza emnqubeni, yayingasoze ibe nabantwana. Ngoko, kwakungazukubakho ndlalifa. (ABagwebi 11:34) Ngoko uYifeta wathi: “Ndiwuvulile umlomo wam kuYehova, andikwazi ukujika.” (ABagwebi 11:35) UYehova wasamkela isipho sikaYifeta waza wamsikelela. Ngaba nawe ngewawunyaniseke njengoYifeta?
15. Sisiphi isithembiso esisenzileyo, yaye sinokuzingqina njani sithembekile?
15 Xa sasizahlulela kuYehova, samthembisa ukuba siya kwenza ukuthanda kwakhe nokuba sekumnyam’ entla. Sasisazi ukuba kuza kuba nzima ukusigcina eso sithembiso ngamanye amaxesha. Sisabela njani xa sicelwa ukuba senze into esingayithandiyo? Ukuba siyazoyisa iimvakalelo zethu size sithobele uYehova, singqina ukuba sinyanisekile kwisithembiso sethu. Kusenokuba buhlungu ukuncama ezinye izinto, kodwa iintsikelelo zikaYehova esiza kuzifumana azinakuthelekiswa nanto. (Malaki 3:10) Kodwa kuthekani ngentombi kaYifeta? Yasabela njani kwisithembiso sikayise?
Singalubonakalisa njani ukholo olufana nolukaYafete nolwentombi yakhe? (Jonga isiqendu 16, 17)
16. Intombi kaYifeta yasabela njani kwisithembiso sikayise? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
16 Isithembiso sikaYifeta, sasahlukile kwesikaHana. UHana wathembisa ukunikela ngonyana wakhe uSamuweli ukuba akhonze emnqubeni njengomNaziri. (1 Samuweli 1:11) UmNaziri wayevumelekile ukutshata, abe nentsapho. Kodwa intombi kaYifeta yanikelwa “njengomnikelo otshiswayo,” ngoko yayingazukulungcamla uvuyo lokuba ngumfazi nomama. (ABagwebi 11:37-40) Khawufan’ ucinge nje! Yayisenokutshata neyona nzwana ilungileyo eyayikho ngelo xesha, kuba uyise wayeyinkokeli kwaSirayeli. Kodwa ngoku yayiza kuba ngumkhonzi oqhelekileyo emnqubeni. Yasabela njani le ntwazana? Yabonisa ukuba inkonzo yayo kuYehova yayiyeyona nto ibalulekileyo ngokuthi kuyise: “Yenza kum ngokuvumelana noko kuphume emlonyeni wakho.” (ABagwebi 11:36) Yancama umnqweno wokwemvelo wokuba nomyeni nabantwana ukuze ikhonze uYehova. Sinokuwuxelisa njani umoya wayo wokuzincama?
Intombi kaYifeta yancama umnqweno wokwemvelo wokuba nomyeni nabantwana ukuze ikhonze uYehova
17. (a) Sinokuluxelisa njani ukholo lukaYifeta nentombi yakhe? (b) Amazwi afumaneka kumaHebhere 6:10-12, akukhuthaza njani ukuba ube nomoya wokuzincama?
17 Amawakawaka amaKristu aselula ancama ukutshata okanye ukuba nabantwana, okwangoku. Ngoba? Kuba afuna ukunikela ingqalelo ekukhonzeni uYehova ngokuzeleyo. Kwakhona, uninzi lwabo sele bekhulile bancama ixesha ebebenokulichitha nabantwana okanye abazukulwana babo. Banikela ngexesha namandla abo kuYehova. Abanye basebenza elwakhiweni, okanye baye kwiSikolo Sabavangeli BoBukumkani baze bafudukele kumabandla adinga abavakalisi abangakumbi. Abanye benza amalungiselelo okwandisa ubulungiseleli babo ngexesha leSikhumbuzo. UYehova akasoze akulibale ukuzincama ngothando kwabo bonke aba bathembekileyo. (Funda amaHebhere 6:10-12.) Kuthekani ngawe? Ngaba ukulungele ukuncama okuthile ukuze ukhonze uYehova ngakumbi?
18, 19. Sifunde ntoni kwingxelo yeBhayibhile engoYifeta nentombi yakhe, yaye sinokubaxelisa njani?
18 Wancedwa yintoni uYifeta ukuze akwazi ukumelana neengxaki zakhe? Wavumela uYehova ukuba amkhokele xa esenza izigqibo. Wakhetha ukuba angaphenjelelwa ngabantu ababemngqongile, ibe wahlala ethembekile nakuba abanye babemdanisa. UYehova wamsikelela uYifeta nentombi yakhe ngokuzincama kwabo, waza wabasebenzisa bobabini ukuhambisela phambili unqulo olunyulu. Naxa abanye bayekayo ukwenza okulungileyo, uYifeta nentombi yakhe baqhubeka bethembekile kuYehova.
19 IBhayibhile ithi, ‘Yibani ngabaxelisa abo bathi ngokholo nomonde bazidle ilifa izithembiso.’ (Hebhere 6:12) Masixelise umzekelo kaYifeta nentombi yakhe, sisazi ukuba, xa siqhubeka sithembekile kuYehova, uya kusisikelela.
Umnikelo otshiswayo: Iminikelo okanye imibingelelo etshiswayo ikhankanywe kuMthetho kaMoses. Xa umSirayeli wayefuna ukubonisa umbulelo wakhe kuYehova, wayethatha isilwanyana aze asinike ababingeleli ukuba basitshise esibingelelweni njengomnikelo opheleleyo otshiswayo. Umntu wayesenokunikelwa kuYehova njengomnikelo otshiswayo, oko kuthetha ukuba, wayeya kukhonza uThixo ubomi bakhe bonke
IMBONISELO—YOKUFUNDISA Aprili 2016